How'd it happen and more reports?: My Life asaShan Princess- အင်ဂျီ (မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ)
My Life asaShan Princess- အင်ဂျီ (မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ)
Twilight Over Burma (ခ) မှုန်ရီဆိုင်း တိုင်းမြန်မာ
သီပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နှင့် အင်ဂျီ (မဟာဒေဝီ စဝ်သုစနီ)္ဒ တို့ ၂ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက တကယ့်ကို ပုံပြင်ဆန်ပြီး ကြည်နူးဖွယ်၊ကြေကွဲဖွယ်စရာကောင်းတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်လေးတွေကို တင်ပြချင်လို့ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါ...
ဒီစာအုပ်ကို လက်ရှိအပြင်စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာတော့ "မြူတိမ်ဝေဝေ တောင်ခိုးဝေးဝေး" အမည်နဲ့ ပြေ (ဆေး-၂) ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ စာအုပ်တန်ဖိုးက ၄၀၀၀ိ/-ကျပ်ပါ။ ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ မူရင်း စာရေးသူကတော့ သီပေါ စော်ဘွား စဝ်ကြာဆိုင်ရဲ့ မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်း အစိုးရလက်ထက် ရက်စက်မှုများနဲ့ သီပေါစော်ဘွားတို့ရဲ့ ဘဝအခြေအနေများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးသား ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကဲ.. ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ကြောင်းပါ။
Twilight Over Burma ခေါ် မှုန်ရီဆိုင်း တိုင်းမြန်မာ PDF Download
The Last Mahadevi (Queen) re: Burma / Myanmar
သီပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နှင့် အင်ဂျီ (မဟာဒေဝီ စဝ်သုစနီ)္ဒ တို့ ၂ယောက်ရဲ့ ဇတ်လမ်းလေးက တကယ့်ကို ပုံပြင်ဆန် ပြီး ကြည်နူးဖွယ်..ကြေကွဲဖွယ်တွေ အတိနဲ့ပါ။
ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ်ရဲ့ ဒန်ဗာ ဆိုတဲ့မြို့လေးက Colorado School of Mines မှာ ကျောင်းလာတက်ကြတဲ့ အာရှတိုက်သား မိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေး နဲ့ exchange student အနေနဲ့ ခဏ ရောက်နေတဲ့ သြစကြီးယား နိုင်ငံသူလေး တို့ ချစ်ခင်စုံမက်သွားကြတဲ့ သာမာန် အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တခုပါပဲ။
ဒီ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေးဟာ အာရှတိုက်က ဘုရင်ငယ်လေး တပါး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိစေအောင် သူကိုယ်တိုင်က သိုဝှက်ထားခဲ့တယ်တဲ့။
ကော်လိုရာဒိုမှာ ပညာဆည်းပူးနေတုံး Colorado school of Mining က မိုင်းတူးအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား သီပေါစော်ဘွား စဝ်ကြာဆိုင်နဲ့ အင်ဂျီ ဖူးစာဆုံခဲ့ကြတယ်။
၁၉၅၃-ခုနှစ်မှာ ကော်လိုရာဒိုရှိ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအိမ်မှာပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ ၂ယောက် လက်ထပ်ပြီးတော့ အင်ဂျီက..ယောင်နောက်ဆံထုံးပါ လိုက်လာခဲ့တယ်။
သူတို့ သဘောင်္ကြီး ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းကို ကပ်ကာနီးလို့ အလံတွေ ပုဝါတွေ တရမ်းရမ်း..ဗုံမောင်းသံ တညံညံ နဲ့ ဆိပ်ကမ်းပြည့် ကြိုနေကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေကို မြင်တော့မှ…. “There is something I have to tell you, my dear.” လို့ ပြောလိုက်တဲ့..ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ… သူမဘ၀ဟာ အရှင်လတ်လတ် ကနေပြီး.. မင်းသမီးတပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး တပြိုင်တည်းမှာပဲ ရှုပ်ထွေးလာနိုင်မဲ့ သူ့ အနာဂါတ်ကိုလည်း အာရုံရမိလိုက်တယ်လို့.. အင်ဂျီက လွမ်းဆွတ် ထားပါတယ်။
သီပေါသို့ ရောက်ရှိပြီး လအတန်ကြာတွင် တရားဝင်ရိုးရာ လက်ထပ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဗေဒင်နက္ခတ်အရ မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ ဟူသော ရှမ်းအမည်ကို ရရှိခဲ့တယ်။
သူတို့ မောင်နှံ သီပေါ ဟော်နန်းကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး..အဲဒီ နယ်တခွင်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွေ ဖြစ်လာ တော့တယ်။
စပ်ကြာဆိုင်က..သူကိုယ်တိုင် လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် စနစ်ကြီး ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရင်း.. သူ့ရဲ့ ရှမ်းအမျိုးသားတွေကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီ လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်။
မြေယာတွေ ကို ပြည်သူ့ဆီ ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
သူသင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့..ဒီဒေသ ရဲ့ အသက်သွေးကြော..တွင်းထွက် သယံဇာတတွေ ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။
သြစတြေလျ နိုင်ငံက..ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်တွေ ငှားပြီး တိုင်းတာ ရှာဖွေရေး တွေကို အကောင်းဆုံးအဆင့် နဲ့လုပ်တယ်..။
နိုင်ငံခြားက..မျိုးစိတ်အသစ်တွေ ၀ယ်ယူပြီး.. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေကို..စက်မူ နည်းပညာတွေနဲ့ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်။
စဝ်သုစန္ဒီသည် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ဗမာ၊ ရှမ်း ဘာသာစကားများကို သင်ယူ တတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး မိမိကိုယ်ကို ရှမ်းလူမျိုး တစ်ဦးအဖြစ် စတင်ခံယူလာခဲ့ရုံသာမက သီပေါဒေသခံများကလည်း သူမအား ရှမ်းလူမျိုး မဟာဒေဝီ တစ်ဦးအဖြစ် လက်ခံလာကြတယ်။
ဒါ့အပြင် စဝ်သုစန္ဒီဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တွဲဖက်ကာ သီပေါဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကူညီခဲ့ပြီး သားဖွားဆေးခန်းနှင့် ဗမာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ရှမ်း ဘာသာသုံးမျိုးဖြင့် သင်ကြားသော စာသင်ကျောင်း ကိုတည်ထောင်ရင်း ကိုယ်တိုင် လုပ်အားပေးခဲ့တယ်။
အင်ဂျီ ကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ တွေကို ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဗမာလုံခြည်နဲ့ ဆံထုံးနဲ့ နေထိုင် ဆင်ယင်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးကို အားလုံးက.. အလေးထား လေးစားခင်မင်ကြတယ်။
အဲဒီ ရပ်ရွာတွေမှာဆို.. သူတို့ မောင်နှံပုံကို ဘုရားစင်မှာတင်ပြီး ကိုးကွယ်တာမျိုးတောင် ရှိခဲ့တယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့.. ၁၉၆၂ ခု နှစ် မတ်လ ရဲ့ နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်း ထဲမှာပဲ..ရန်ကုန်မြို့လွှတ်တော်ညီလာခံ က အပြန် ဘယ်မှာ ပျောက်ဆုံး သွားမှန်း မသိတဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ကို ယနေ့ထက်ထိ ဘယ်သူမှ ပြန်မတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။
အဲဒီ အချိန်မှာ လူမမယ် မာယာရီ နှင့် ကိန္နရီ အမည်ရှိ သမီးနှစ်ဦး နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကို သီပေါ ဟော်မှာပဲ.. အစောင့်အကြပ် ထူထပ်စွာ နဲ့ အကျယ်ချုပ် ထားခဲ့တယ်။
ဘာကိုမှ မကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကလည်း.. သူ့ဆက်သွယ်နိုင်သမျှ အရာရှိ စစ်အာဏာပိုင် မှန်သမျှ ထံ လိုက်လံ စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့.. “I am writing this secretly. I am being locked up in the army lockup at Ba Htoo Myo at Lawksawk… Miss you all. Conditions here are not clean. Hope to see you soon. Cheer up yourself! I am still OK. Love, Sao Kya Seng.” ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်စွာ ရောက်လာတဲ့. စာလေးတစောင်က လွဲလို့.. ဘာသဲလွန်စ မှ မရခဲ့တော့ဘူး။
၂ နှစ်လောက်.. အားမလျှော့တမ်း စုံစမ်း နေခဲ့ရင်း.. နောက်ဆုံးမှာတော့. .သူ့အတွက် အန္တရယ်တွေ ၀ိုင်းနေတဲ့..တစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်.. သြစကြီးယားသံရုံးရဲ့ အကူအညီနဲ့ သမီးလေး ၂ ယောက်အတွက် နိုင်ငံကူးလတ်မှတ် အတု လုပ်ပြီး မြန်မာနိင်ငံထဲက..ခိုးထွက် ခဲ့ရတယ်။ သီပေါစော်ဘွားစောဝ်ကြာဆိုင်ဟာ.. ၁၉၆၂ခုနှစ် စစ်အာဏာ အသိမ်းမှာ တခြားသော.. တိုးတက် ထက်မြတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် များနည်းတူ.. လက်စဖျောက် ခံခဲ့ရပြီးနောက် အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးလေး ဟာသမီးငယ် နှစ်ယောက်နှစ်အတူ မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွါလာခဲ့ရတယ်။
အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်ရင်း..မှောင်စပြုနေတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ ဖိနှိပ်ကန့်သတ်မူတွေကို ကမ္ဘာက သိအောင်..နောက်..သူ့ခင်ပွန်းစပ်ကြာဆိုင် ရဲ့ သူ့မြေသူ့ရေ အပေါ် တာဝန်ကျေခဲ့ပုံ.. နိုင်ငံရေး အမြင်ကျယ်ခဲ့ပုံတွေ..လူသားဆန်ခဲ့ပုံတွေကို မှတ်တင်းတင် ရစ်ဖို့ပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၉၄ မှာ ဟာဝိုင်ယီတက္ကသိုလ် စာအုပ်တိုက်က..ပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ အတွင်းအဖုံးမှာ အမေရိကန်မှာ အခြေချ နေထိုင်နေတဲ့.. စာရေးသူ -အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာမ ကြီး အင်ဂျီရဲ့ မဟာနဖူး ဆံထုံး မြင့်မြင့်ကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံ ကို ကြက်သရေ ရှိစွာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Burma lifeline ဆိုတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတခုကိုလည်း အင်ဂျီက မတည်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Twilight Over Burma (Www.linnyankha.blogspot.com)
Once uponatime inafar away land, called the Shan state of Burma, Ella Sao Tern Moen wasaprincess. Now she lives in the United States. In an interview with Kaye Lin for Voice of America, Ella opens up about her life there and what happened to her family...
ဒီမှာ ၀ယ်ဖတ်လို့လဲ ရပါတယ်....
တစ်ရံတစ်ခါက မဟာဒေ၀ီ စ၀်သုစန္ဒီ=
Posted by Ko Nge at Sunday, September 21, 2014